ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “တခါတုန်းက တို့ကမ္ဘာမှာ”
အများညီ ဤ ကို ကျွဲ ဖတ်ဆိုတဲ့ စကားရှိတယ်လေ..ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း။
:D ငတုံးတော့ မထင်မိပါဘူး...
သူတို့ပြောတာတွေမှန်ခဲ့လို့ အခုကမ္ဘာကျော်နေကြတာ..... သူတို့ကမှန်တယ်ဆိုတော့ တစ်ရွာလုံးက လူမိုက်တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ ။ နောင်တစ်ချိန် ကိုပေါလဲ.........။ အင်း... အချိန်က အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ် ။ အခုတော့ good တယ်ထင်ရင် do သာ do ။း)း)း)
little bit of...
Great Mind, Buddhism, +ive Thinking, Productivity, Insights, Sharing Knowledge, Useful Info, Good Entertaining, Etc....
>> ကြည် …. ကျွဲအုပ်နဲ့ ဝေးရာမှာနေပါ။း-)
>> Phyo Maw …. ငတုံးတော့ မထင်မိဘူးဆိုရင်… ဘာတော့ ထင်မိပါသတုံး ကဖြိုးမော်။း-)
>> Thant …. သူတို့က ကမ္ဘာကျော်ပေမယ့်…. တခြားလူတွေမှာတော့ ဘယာကြော် ကြော်ရကိန်းရှိတယ်။ အညာဖက်မှာ အကြော်သည်တွေဆိုတာ ရွာပြင်က အကြော်တဲမှာ ကြော်ရတာမျိုးကလား။
>> အမည်မသိ …. Please find inside yourself.
Mahatma Gandhi said, “You must be the change you want to see in the world.”
Therefore, please stop seeking those qualities in others but do try to seek in thyself. ;-)
အင်းဗျ။ ဂျော်ဒါးနိုး ဘရူနို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့့ သတ်ခံရတာကို သတိရမိတယ်။
ပြပေးပါ၊ဘာရေးရေး ” အားလုံးကောင်းပါ
သည်ခင်ဗျား ” လို့မရေးသင့် ( ကောင်း ) ကြောင်းပါ၊ ဆိုလိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ခင်လို့တရား
ရေးခင် teashop ကတည်းက
ဖတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့မှတ်ချက်ပါ၊ မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြသလိုဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ.....
အဲဒီ ကဗျာ အမှန်ပဲဗျာ...။ နိုင်ငံရေး အရတော့ မသိဘူး...။ အလုပ်ထဲမှာတောင် ထူးထူးဆန်းဆန်း တွေးမိရင် ရူးရူးနှမ်းနှမ်း လို့ထင်ကြတာ။ လူကိုများ ငတုံး ထင်နေလား မသိဘူး။ :P
ခေါင်းစီးကိုကြည့်ပြီးသတိရမိတာက လွှမ်းမိုးသီချင်းလေးပါ။ “တစ်ခါတုန်းက တို့ ရွာမှာ သဘောကောင်းပြီးဆင်းရဲတဲ့..ကိုပေါလို့ အများခေါ်တယ်” ဆိုတာလေ။ နောက်တော့ “အရူးအပေါဖြစ်ပေမယ့်..အသက်စွန့် ပြီးချစ်သွားတယ်..”ဆိုတာကို သတိရသွားတော့ ကျွန်မကိုကြိုက်နေပြီး ဆုံးသွားတဲ့ အစ်ကိုကြီးးတစ်ယောက်ကို သတိရသွားပြီးစိတ်မကောင်းဘူး။ နောက်..ပို့ စ်ကိုလည်းဖတ်လိုက်ကော..ကျွန်မတွေးနေတာတွေနဲ့ ဘာမှလည်းမဆိုင်ပါလားပေါ့။ မှတ်ချက်တွေဆက်ဖတ်တော့..ပိုဆိုးသွားပြီ။ ဒါနဲ့ အခုတခါ ကမ္ဘာကြီးက ပြားသွားပြီလို့ ဆိုကြပြန်ပြီနော် ကိုပေါ။ ခုတော့ ပြောတဲ့သူကို ၀ိုင်းမတွယ်ကြပြန်ဘူးလား။ သိတာလေးတွေ မျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ။
ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် အဲ့လို ထင်နေတဲ့ အချိန်မှာမှ ဂါလီလီယို ဖော်မြူလာကို သွားသတိရလိုက်တာကို က ကိုပေါ ရဲ့လမ်းကြောင်းကို ဒုက္ခထပ်ပေးမဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပဲလို့ ထင်မိတယ်.. ဥုံဖွမန်းရုံနဲ့ ရွှေ ထ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ ကိုပေါလည်း သိပါတယ်.. တိုက်အပေါ်ဆုံးကို တက်ဘို့ လှေခါးထစ်တွေ စက်လှေခါးတွေ သုံးရပါတယ်. ၀ုန်းကနဲ ပျံသန်းလိုက်ယုံ နဲ့ ချက်ခြင်းရောက်သွားနိုင်တာ စူပါမင်း မှာမှ ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်..။ ဖောက်ထွက်တိုင်းလည်း မဟုတ်သေးဘူး ဆိုတာ တစ်ခါက ရေးခဲ့သလိုပဲ အဘိဓမ္မာ နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း ကို စောင့်မျှော်နေသလို မျိုးပေါ့.။ စိတ်မလောပါနဲ့... ကို ပေါ. ။ အဲ့ဒါလေးတွေကိုသာ ဖြည့်နိုင်ရင် ကိုပေါရဲ့ ဦးတည်ချက် ဟာ ပိုမိုထိရောက်လာ နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်. ကိုပေါ ရဲ့လမ်းကြောင်း ပိုမို ဖြောင့်ဖြူးလေ.. ကျနော်တို့ နိုင်ငံတွက် ပိုမို အကျိုးရှိလေ ဆိုတာ သိလို့ ဟနေတယ် ထင်တဲ့ နေရာတွေကို အကြံပေးတာပါ..။ (အကြံပေးခြင်း ကို ဆရာကြီး လုပ်ခြင်းဟု မယူစစေလို- Information Age သည် သတင်းအချက်လက် များသာမက စိတ်ကူးအကြံဥာဏ် များကို မျှဝေ အသုံးချသော ခေတ်ဖြစ်သည်ကို သတိရစေလို-)
>>> ကောင်းကင်ကို … အခုခေတ်မှာတော့ နေရာအတော်များများမှာ ပိုယဉ်ကျေးလာတယ်ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။
>>> Anonymous … လက်ဘက်ရည်ဆိုင်က မိတ်ဆွေဟောင်းပေါ့။ မပူပါနဲ့ဗျာ။ ကျနော်ရေးတဲ့စာတွေကို ထောက်ခံသူထက် လက်ခံသူနည်းပါတယ်။
>>> နေညိုရင့် … ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ဘာတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေးရင် ရူးရူးနှမ်းနှမ်းလို့ ထင်ကြသတဲ့။ ကဗျာပဲ။
>>> ယုဝရီ …အခုခေတ်ကျတော့ ကမ္ဘာကြီးပြားသွားပြီ ပြောတဲ့လူရဲ့ စာအုပ်တွေကို အသည်းအသန် ၀ယ်ဖတ်နေကြရပြန်တယ်ခင်ဗျ။ ဒါထက် မယုဝရီက တယ်စွံသကိုး။း-)
>>> FullStop … စူပါမင်းဖြစ်ချင်လို့မဟုတ်ပါ။ Paradigm shift နဲ့ Different view အကြောင်းကို တို့ထိကြည့်ရုံမျှပါ။ အကြံပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူချင်မှ ယူမှာဆိုတာ ကြိုပြောထားလိုက်ပါတယ်နော်။
C-box ကလဲ မရှိတော့ ဒီမှာပဲ ရေးခဲ့တော့မယ်။
ပန်နီဆူလားက ရွှေရတနာဆိုတဲ့ဆိုင် ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းကဒ် ညာရောင်းတယ်ဗျာ။ ကိုပေါ ဖြစ်နိုင်ရင် ပညာပေး ဆောင်းပါးလေး ရေးချင်ရေးပါလား။ (ဖြစ်နိုင်မှပါ။ မအားလို့၊ မူနဲ့ မကိုက်လို့ မရေးလဲ ရပါတယ်။)
အသေးစိတ်ကို http://opera.lawshay.com မှာ ရှု။
ငါမှအမှန်.. မင်းမှအမှားဆုိုပီး ကုိုယ်သန်ရာစွဲတတ်လွန်းတဲ့ လူ့သဘာဝကုို ထင်းစေတဲ့စာပေါ့ဗျာ.. အများကမှန်တယ်ထင်တုိုင်း ဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာဟေ့ဆုိုတာလည်း သင်ခန်းစာရမိပါတယ် ကုိုပေါရေ..
ဒါပေမဲ့ဗျာ.. အဲဒီခေတ်ကုို ပြန်တွေးမိတယ်.. မောင်သတိဆုိုရင် အဲဒီ ကမ္ဘာလုံးတယ်လုို့ ပြောတဲ့လူတွေကုို အရူးလုို့ ပြောမှာ သေချာပါတယ်.. ကိုယ်ရပ်တည်နေတဲ့ ဒီလောက်ပြန့်ပြူးညီညာနေတဲ့ မြေပြင်ကြီးက ပြားနေပါတယ်ဆုိုတဲ့ လုံးဝသေချာမှန်ကန်တဲ့ အယူအဆတောင် မှားခဲ့သေးရင်..
အင်း.. အဲဒီတော့လည်း ကျွန်တော်တုို့ ဘာကြောင့် ကုိုယ်မှန်တယ်ထင်တဲ့ အယူတစ်ခုအတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပုတ်ခတ်ငြင်းခုန်ကြမတုန်းဗျာ.. ဟားဟား..
My hart will go on because of you.
You are Nga Paw.
I am Nga Paw.
Most of blogger are Nga Paw.
Most of blog reader are Nga Paw.
Unless expressly provided otherwise:
Nga Paw meansaperson who has different ideas from formal way.
Most of Nga Paw has sufficient knowledge and good IQ. Heeeeeee...
April 12, 2009 at 12:03 PM